Ugbu a, oke ọhịa nile na - ezuru ihe na ederede iji bipụta
Ugbu a, oke ohia nile bu ihe ndi ozo na ederede
Ugbu a, oke ohia nile na - ezu ike - ederede
Nwatakịrị ahụ na-etolite, otú ahụ ka ọ ga-achọ iji ụda olu ya site n'ịge abụ na egwu egwu. Ya mere, a ghaghi imeghari nkpu ọ bụghị nanị ịda n'ụra, kamakwa maka ntụrụndụ.
Mpempe akwụkwọ na ederede Ugbu a, oké ọhịa niile na-ezu ike
Ụmụaka adịghị mkpa ihe egwu egwu iji mee egwu. A na - eji ihe niile na - emegharị, na - emegharị ma ọ bụ na - A na-ejikwa olu gị. Ma ijide n'aka na pitch ahụ dịka ọ dịkarịa ka ọ dị mma, ọ na-amasị gị ịpịpụta template na-emetụtara nwa anyị na-eji ederede na ederede akwụkwọ ntụrụndụ. Ụmụ buru ibu nwere ike igbanye epupụta na ndetu na ederede dị oke!
Ugbu a, oké ọhịa nile na-ezu ike,
Anumanu, ndi mmadu, obodo na ubi,
ọ na-arahụ ụwa dum;
ma gị onwe gị, uche m,
elu, na, ị kwesịrị ịmalite,
nke na-atọ onye kere gị ụtọ.
Ebee ka ị, anyanwụ, nọrọ?
N'abalị ahụ, ị ​​chụpụrụ gị,
abalị, onye iro ụbọchị.
Mbanye n'ebe ahụ; anyanwụ ọzọ,
Jizọs m, obi ụtọ m,
ọbụna na-enwu gbaa n'obi m yiri.
kpakpando ndị mara mma na-egbuke egbuke
na mbara ígwé ojii na-acha anụnụ anụnụ;
N'ihi ya, m ga-eguzo,
mgbe aha m ga-aga
chi m si na nzuzu mmiri a.
Ahụ na-agba ọsọ ngwa ngwa
wepụ uwe na akpụkpọ ụkwụ,
foto nke ọnwu;
Ana m ewepụ ya, megide ya
Kraịst ga-etinye m ego
uwe nke nsọpụrụ na otuto.
Isi, ụkwụ na aka
enwe obi ụtọ na ugbu a ruo ọgwụgwụ
Obi, na-aṅụrị ọṅụ, ị ga-aghọ
site na nhụsianya nke ụwa ndị a
na-arụ ọrụ n'efu pụọ na mmehie.
Ugbu a gaa, ị na-akụda aka,
gaa ma dinaa,
E nwere ọtụtụ awa na oge,
n'ihi na ị ga-akwado
iji zuru ike obere bed n'ime ụwa.
Anya m dị njọ,
ọ dịghị oge ha mechiri.
Ebee ka ahu na nkpuru obi di?
Were ya gaa n'amara gị
dị mma maka nsogbu niile,
anya gị ma chebe Izrel '.
Gbasaa nku abụọ,
Jesus, ọṅụ m,
ma were obere nwa gị.
Setan ọ ga-eripịa m,
Ya mere ka ndị mmụọ ozi bụrụ abụ:
"Nwa a ekwesịghị imeju ya ahụ."
Ọbụna gị onwe gị,
ekwesịghị ikwute taa
enweghị mberede ma ọ bụ ihe ize ndụ.
Chineke kwere ka ị na-ehi ụra na-enwe obi ụtọ,
chee echiche banyere ngwá agha ndị gilded
gburugburu bed na ìgwè mmụọ ozi ya.
Ihe omuma site n 'ugbua akwukwo ugbua Ugbu a, ohia nile na-ezu ike dika akwukwo ogwu